Ku soo dhowow dukaankayaga internetka!
Matoorrada bilowga ah
Sharaxaada: Bilowga, 24V, 5.5kW, 12t OEM REFERENCE BOSCH 0001241001 BOSCH 0001261001 BOSCH 0001261002 BOSCH 0001261025 BOSCH 0001261026 BOSCH 0001261027 BOSCH 0001261028 SCANIA 0579261 SCANIA 05792776776776777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777797777777777777777777777797777 "
Qiimaha ugu fiican Shiinaha Wd615 Diesel Engine Starter Motor 0001241008 612600090293 0001261016 0001241012 30153n China 6s4z-G76.610100, 612630030011, China starter motor, starter motor, truck
Hadafkayagu waa sida caadiga ah inaan ku gaarsiino alaabo tayo sare leh safafka qiimaha gardarada ah, iyo adeeg heer-sare ah oo ka iibsadayaasha adduunka oo dhan. Waxaan nahay ISO9001, CE, iyo GS shahaado oo si adag ugu hoggaansan tafaasiishooda tayada sare ee Qiimaha ugu Fiican Shiinaha Wd615 Diesel Engine Starter Motor 00 ...
Beddelka Gawaarida iyo Falanqaynta Suuqa Gawaarida Bilowga Codsiga, Falanqaynta Gobolka (Ameerika, Yurub, Aasiya Baasifigga, iyo Bariga Dhexe & Afrika), Iyo Saadaasha 2021-2026
Warbixin cusub oo wargelin ah oo ku saabsan Beddelka Gawaarida Caalamiga ah iyo Suuqa Gawaarida Bilowga ah oo cinwaan looga dhigay ayaa dhowaan lagu daabacay Cusboonaysiinta Cilmi-baarista Suuqa xogteeda humongous taas oo gacan ka geysaneysa qaabeynta mustaqbalka meheradaha iyada oo la gaarayo go'aammo ganacsi oo xog-ogaal ah .. Muddada saadaasha 2021-2026 waa ...
Shirkaddayadu waxay ku taxan tahay mashruuca horumarinta muhiimka ah ee magaaladeena
Bishii Maarj 27, 2021, dawladda magaaladayadu waxay hoggaaminaysay wefti shirkadeena u yimid kormeer kormeer, waxay u kuurgaleen goobteenna wax -soo -saarka, waxayna muujiyeen xaqiijin iyo ammaan tiknoolajiyadeena iyo badeecadeenna. Baaritaan iyo dood kadib, shirkadeena waxaa loo xushay mashruuc horumarineed oo muhiim u ah hig ...
Isbedelka kobaca iyo kobaca cajiibka ah ee suuqa bilowga jilicsan ee mootada ayaa la filayaa 2027
Falanqeeyayaasha Insight Partners waxay saadaalinayaan in warbixintii ugu dambeysay “Saamaynta iyo falanqaynta suuqa bilowga ah ee jilicsan ee baabuurta (Covid-19) marka la gaaro 2027 ″; warbixinta suuqa bilowga ah ee jilicsanaanta daboolku wuxuu daboolayaa falanqaynta guud ee suuqa, oo ay ku jiraan dhammaan qodobbada saameeya kobaca suuqa. Warbixinta waxaan ...
Waa maxay bilowga Dhimis?
Bilowga oo leh qalab yareeyaha ayaa lagu rakibay inta u dhexeysa godadka armature -ka ee bilowga ah iyo qalabka wadista waxaa la yiraahdaa bilowga dhimista. Awoodda matoorka DC ee xiisaha leh ee taxanaha ah ayaa si toos ah ugu habboon saamiga iyo xawaaraha. Waxaa la arki karaa marka xawaaraha mootada la kordhiyo iyadoo la dhimayo ...
Falanqaynta khaladaadka ee matoorrada bilowga ah waxaa bixiya Nitel-motors
Baabuurta qaarkood, marka la beddelo bilowga, qaybo ka mid ah ayaa si aad ah loo duugay, mararka qaarkoodna bilowgii ayaa gubtay. Haddaba waa maxay sababta ifafaalahan? 1. Beddelka bilaawga solenoid -ka iyo rotor -ka oo gubanaya Sababta ugu weyn ayaa ah in qalabka aan lagu celin karin booskiisii ​​hore. T ...
Waa maxay alaabtayada?
Tan iyo aasaaskeedii, Shirkaddayadu waxay aasaastay qaab-dhismeed wax-soo-saar oo dhammaystiran, oo leh in kabadan 10 taxane ah iyo 100 moodel oo matoorro bilaabaya .Shirkaddayadu waxay awood u leedahay soo saarid sannadle ah oo ah 500000 nooc oo bilow ah oo lagu soo saaray khadka wax-soo-saarka qaranka oo heer sare leh oo leh farsamo dhammaystiran .. .
Shirkadda Nitel waxaa la aasaasay sanadkii 2010, waa alaab-qeybiye aad u fiican oo bilawga yareynta marsho iyo qeybaheeda. Waqtigan xaadirka ah, ma aha oo kaliya kooxda hormuudka u ah shirkadda inay leeyihiin fikirka hore, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin koox shaqaale farsamo oo karti leh iyo kooxda shaqaalaha ee la halgamaya shirkadda ...
Isku qor wargeyskeena si aad ula socoto xayaysiisyadayada, qiimo dhimista, iibinta, iyo dalabyada gaarka ah
Cinwaanka: No.32 waddada Huanhe, aagga Farsamada Sare, magaalada Liaocheng, gobolka Shandong, Shiinaha
isniin - jimce: 8am - 6pm